လေနုအေး: သားနဲ့သားကို အနိုင်ကျင့်ကြသူများ
Posted by တန်ခူး at 10:59 PM
သားသားရေ ဖတ်ရတာ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။
သားသားကြီးလာရင်လည်း အဲ့ဒီလို အနိုင်ကျင့်စရိုက်ဆုိုးတဲ့ လူတွေထပ်ကြုံရဦးမှာမို့ပါ။ ဆက်ဆံရအခက်ဆုံး၊ လုပ်ရကိုင်ရ အခက်ဆုံးအရာဟာလည်း အဲ့ဒီလူသားတွေပါပဲ။
တချို့အချိန်တွေမှာ ပါးနပ်ရမယ်၊ တချို့အချိန်မှာ ကာကွယ်ရမှာ၊ တချို့အချိန်တွေမှာ ငြိမ်နေရမယ်..စတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှင်သန်နေရဦးမယ်။ သားသားဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလိုက်အထိုက်၊ လျော့သင့်တာ လျော့၊ တင်းတဲ့အခါ မာ သူတပါးကိုလည်း မစော်ကားပဲ ကိုယ့်ကို စော်ကားတာကိုလည်း လွယ်လင့်တကူ ခေါင်းငုံ့မခံတတ်တဲ့သူ စိတ်အေးချမ်းတတ်သူ တယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်..
အစ်မတန်ခူး... အစအဆုံးဖတ်ပြီး သက်ပြင်းချတယ် ၊ ရင်မောတယ် အစ်မရေ ..။
ကိုယ့်သမီးကလဲ လူကြောက်တတ် ၊ မျိုသိပ်တတ်တဲ့ ကလေးဖြစ်နေလို့ ကျောင်းမထားရသေးခင်ကို စိတ်ပူနေတာ ။
ညီမရှေ့မှာ တစ်ခါကြုံဖူးတယ်။ အမေလုပ်သူဆေး၇ုံကို လိုက်လာရင်း အလှည့်စောင့်နေတုံး သမီးကစားချင်တယ်ဆိုလို့ ဆေးရုံကလေးဆေးခန်းထဲက ကစားစရာတွေ ထားပေးတဲ့ အခန်းထဲ သွားကစားတုံး ဆေးခန်းလာပြတဲ့ကလေး(ယောကျာ်းလေး) တစ်ယောက်က အခန်းထဲ သူ့ဘာသာသူ ကစားနေတဲ့ ကလေးအားလုံးကို လိုက်ပြီး နှောက်ယှက်တာလေ.. သမီးထိုင်ကစားနေတာကို အကျီရင်ဘတ်စ ကိုဆောင့်ဆွဲပြီး အတင်း ထ ခိုင်းတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေ (အားလုံးလိုလို သူ့ထက်ကြီးတဲ့ကလေးတွေ) ကိုလဲ ကစားစရာတွေ လိုက်လုလိုက် ၊ ဆောင့်တွန်းလိုက်နဲ့ လုပ်တာ ။ သူ့အဖေ ခေါ်လိုက်မှ ငြိမ်သွားတာ ။ တခြားကလေးတွေက သူ့ကို ဝိုင်းရယ်ကြ ဘာညာလုပ်ပေမဲ့ သမီးက သူ့ကို အဲလိုဆက်ဆံတာ တစ်ခါမှမကြုံဖူးတော့ တော်တော်ကို လန့်သွားတာ ..။ သမီးကို ဘာမှ မဖြစ်ဘူး.. သမီး ဆက်ကစား ဆိုပြီး အားပေးမှ ခဏနေတော့ သူဆက်ကစားရဲတယ်။ ကျန်တဲ့ ကလေးတွေက ထွက်သွားပြီ ။ ခုနက ကလေးက သူ့အဖေနားမှာဆိုတော့အေးဆေးပဲ ထင်တာ ..သူက ပြေးလာပြီး သမီးကို ခုံပေါ်က တွန်းချတာလေ ။ ခုံကလေးက နိမ့်တော့ မနာပေမဲ့ သမီးအရမ်းလန့်ပြီး ငိုတာ အိမ်အပြန်ထိ ချော့မရတော့ဘူး။ ဟိုကလေးအဖေက အဲဒီတော့မှ အဲဒီကောင်လေးကို ချီပြီး ထွက်သွားတယ်။ သူ့ကလေး နကိုယ်ဗီဇက သူများကို နှောက်ယှက်ချင်တာလား၊ နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်မို့ လုပ်သလားတော့မသိဘူးရယ်...။
ခုထိ စဉ်းစားနေတာ ... အဲလိုမျိုး ကိုယ့်ရှေ့ကြုံရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲလို့ ..။
သမီးလေး စိတ်ထဲမှာ မေမေရှိလိုက်သားနဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံရတယ် လို့ အမေကိုတောင် အားမကိုးရဘူးဆိုပြီး အားကိုးရာမဲ့ စိတ်ဝင်သွားမလားဆိုတာ တော်တော်ပူမိတယ်။ တဘက်က ကလေးကလဲ ကလေးပဲ ဖြစ်နေတော့ ကိုယ်က ဘာမှ ပြောလို့ မဖြစ်ဘူး၊ သူ့မိဘလဲ ရှိသားနဲ့ဆိုတော့လေ ။
ကိုယ့်ဘ၀အကြောင်းပြန်ဖတ်နေရသလိုပဲ မတန်ခူးရေ။ သားလေးရဲ့ရိုးဖြောင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားတယ်။ ဒါကို အခွင့်အရေးယူ အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့လူတွေကို သည်းမခံဖို့၊ ကိုယ်မှန်ရင် လုံးဝ ငုံ့မခံဘူးဆိုတဲ့ စိတ်မွေးဖို့၊လူဆိုတာ သဘောကောင်းမယ်ထင်ရင် ဗိုလ်ကျချင်တာမို့ သဘောကောင်းပေမယ့် မတရားရင် မခံဘူးဆိုတဲ့ စရိုက်နဲ့နေဖို့ အကြံပေးပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဘ၀မှာ အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရတာ ကိုယ်တွေ့မို့ မာရေကြောရေအသွင်ကိုတောင် လိုအပ်တဲ့အခါ လုပ်ယူခဲ့ရတယ်။ သားလေး ကြီးလာရင် ကျွန်တော့်လို ခါးသည်းတဲ့ အနာတွေ မရစေချင်လို့ပါ။
အိမ်​က သားကိုလဲ အဲ့လို အနိုင်​ကျင့်​ခံရမှာ စိုးရိမ်​ ​နေတာ မမေ၇။အက်​၀င်​ လဲ သူ​ဆော့​နေတဲ့ ကစားစရာ သူများ လာလုရင်​​ပေးလိုက်​တာပဲ။သူ​ဆော့​နေတဲ့​နေရာ သူများလာ​ဆော့ရင်​ အတင်း ကပျာကယာ ဖယ်​​ပေးတာပဲ..သားသား လိုသာ ဆို သများ​တော့ အိပ်​ရမယ်​ မထင်​​တော့ဘူး
move to the United States.......Try it...sister!!!!
poor little boy. :( I need to read it bcz I'mamother of boy too. Wish all the kids can avoid these things wisely.
သားသားသုတ က သဘောကောင်းတယ်ဟ... သူ့မျက်နှာကိုကြည့်တာနဲ့ စိတ်ထားနူးညံ့မှန်းသိသာတယ်... အားလဲအားနာတတ်တဲ့ပုံပဲ... နင်က အမေပီသပါတယ်ဟယ်... ငါ့မှာ သားသမီးမရှိပေတဲ့ နင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ငါနားလည်တယ်...
ဒါပေတဲ့ အဲ့လို ကလေးလေးတွေကြီးပြင်းလာရင် စိတ်ထားကောင်းပြီး အောင်မြင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်လာမှာ...
ဒါထက် စကားမစပ် လသာ၂မှာ တစ်တန်းတုန်းက နင်နဲ့ငါ အတန်းချင်းတူသလားဟ... ငါလည်း အဲ့ဒီ လူကြီးသားသမီးဆိုသူ၂ယောက်ရဲ့ အနိုင်ကျင့်တာကို တောက်လျှောက်ခံခဲ့ရတယ်...
ဖတ်ရတာ သားလေးအတွက် စိတ်ထဲမကောင်းသလို ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ ညစ်တတ်တဲ့ စိတ်ပိုင်ရှင် ကလေးတွေအတွက်လည်း ရင်မောမိတယ်။ ဒီပုံစံဆိုရင် ငယ်ငယ်ကလေးတည်းက သူများမတရားလုပ်ရင် ဘယ်လိုတွန်းလှန်ရမယ် ဆိုတာကို သင်ပေးရမှာပေါ့နော်။ ကလေးတစ်ယောက်အဖို့ ဖိစီးမှုများလှပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးက တခြားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားလေး ဖြစ်နေလို့ ဒီလို အနိုင်ကျင့်ခံရတာလားလို့စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာလည်း ဗွီအိုင်ပီသားသမီးတွေကြားမှာ ဒီလိုကိစ္စတွေ ရှိနေဦးမှာပဲလေ။
ဖတ်ပြီး စိတ်ညစ်လိုက်တား( အိမ်ကအစ်မတွေကတော့လေ အစ်မတို့လိုလည်း အများကြီး ဗဟုသုတ မကြွယ်လေတော့ သူ့သားတွေ ခံရခဲ့လို့ကတော့ နင် လက်မပါဘူးလားဆိုပြီး တီးကော နောက်တစ်ခါ ခံခဲ့ရလို့ကတော့ သေမယ်သာမှတ်တဲ့ ကိုယ့်သာ အရင်လာစလို့ကတော့ ပြန်သာတီးခဲ့နောက်မှ ငါရှင်းမယ်ဆိုတာကြီးပဲ အဲ့တော့ ခဏခဏ ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးခန်းရောက်ရတာပေါ့ ဟိုမှာနာမှာထက် အိမ်မှာ ပိုနာမှာစိုးတော့ တူတွေက ပြန်ဆော်ခဲ့တာကြီးပဲ ။
သားက အစ်ကို အစ်မတွေရှိရင်လည်းကောင်းသား ကျနော့်တုန်းကလည်း အနိုင်ကျင့်ခံရတာပဲ ကိုယ်ကသေးတာကိုး ကျနော့်အပေါ်က အစ်မက စွာတယ် ကျနော်ခံရပြီဆိုလို့ကတော့ ဆရာမ ရိုက်မှာလည်းမကြိုက် တစ်ခြားသူမှာ အစ်ကို အစ်မရှိမှာလည်းမကြောက်တော့ နပန်းဝင်သတ်တော့တာပဲ ။
ဆရာမတွေရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလည်းပါမယ် ပြည်တွင်းမှာက ဆရာမကို တစ်ခါလောက်မိဘ ကိုယ်တိုင် စကားပြောထားပြီးရင် နောက်ဆို ဒီလိုမျိုးမဖြစ်လောက်ဘူး ။
အဲ့တော့ သားကိုပြောပါ လိမ်မာတာတော့လိမ်မာတာပေါ့နော် ဘာမှလည်းမလုပ်ရပဲနဲ့ လျော်ကြေးပေးရတာမတန်ဘူး ဆိုတော့ကာ ခလေးလည်းခံရ မအေလည်းစိတ်ညစ်ရ ဘယ်ဟုတ်မတုန်း သားရယ် အမေစိတ်ပြေအောင် နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်တော့ ပြန်တီးခဲ့ပါလို့ ။ ဒါမှမဟုတ် သား အခန်းဖော် ကျောင်းကားဖော်တွေနဲ့ သားကိုအဖွဲ့ကျဖို့ အစ်မက မိတ်ဖွဲ့ပေးရင်ကော ခုဟာက အုပ်စုနဲ့မို့ပါ တစ်ယောက်ချင်းဆို အဲ့ခလေးတွေလည်းမစွာလောက်ဘူး ။
ရွာမှာကျန်ခဲ့တဲ့ တူမလေး ပို့လိုက်၇မလားး) သူက သူ့အမေခြေရာနင်းသူမို့ ဖြစ်လိုက်လို့ကတော့ လူကြီးပါ ၀င်တားရတယ် အဲ့တာတောင် ၁၀ နှစ်ကျော်လေးမို့ ။
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး သားကို နည်းနည်းလောက်တော့ တွန်းအားပေးပါလေ ပြန်ဆော်ခဲ့ဖို့ ကြီးလာတော့သူ့ပါသာ လိမ်မာလာလိမ့်မယ် သည်းခံစိတ်က ကြီးတဲ့အထိ အကျင့်ပါသွားရင် သိပ်မကောင်း တစ်ခါတလေ ထုံသလိုဖြစ်သွားတတ်တယ် ။
Ya Minn said...
အစ်မရေ.. ကျွန်မသားလေးလည်း ဒီလိုပဲ ဘာပဲလုပ်ခံရ လုပ်ခံရပြန်မပြောဘူး.... လက်မှာကုပ်ခြစ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကို အမေတွေ့မှ သူများလုပ်တာလို့ပြောတယ် နှစ်နှစ်ရှိပြီ အဲဒီကောင်မလေးလုပ်တာပဲ ခံလာရတာ.... ဆရာမကိုတော့ တိုင်လိုက်တယ်..... ကျွန်မဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာပြန်ရှယ်ချင်ပါတယ်နော်... ခွင့်ပြုပါ....
အမရယ် ဖတ်ပီးနင့်ကနဲပဲ ကျနော်သာဆိုရင် လျော်ကြေးမပေးဘူး ပြသနာထပ်ရှာဖြစ်မလားပဲ
အမဆီကနေ အသိတခုထပ်ရလိုက်တယ် သမီးလေးကို ဘာဖြစ်ဖြစ် မအေကိုပြန်ပြောပြဖို့အကျင့်လုပ်ပေးရမယ်
ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျိတ်မခံဖို့သင်ပေးရမယ် သမီးလေး ၅နှစ်လောက်ရောက်ရင်ကို ကရာတေးဖြစ်ဖြစ် ဂျူဒိုဖြစ်ဖြစ် သင်ပေးမယ်လို့အစထဲကစိတ်ကူးထားတာ အခုဆို သင်ကိုသင်မှဖြစ်မှာ ကိုယ့်ကိုလာထိရင် ထိတာနဲ့ ဆရာမ အရင်တိုင် ထား လို့ပြောမယ် ဆရာမက ဘာအက်ရှင်မှမယူရင် သူ့ကိုရှောင် ရှောင်လို့မှမရရင် သမီးရေ မခံနဲ့ မေမေလိုက်ရှင်းမယ်လို့ပြောမယ်
နောကိထပ် သတိထားရမှာက သမီးလေးကို အသိပညာသင်ပေးတဲ့အခါ လူကောင်းတွေကြီးပဲ မပြောပြပဲနဲ့ လောကကြီးမှာ လူဆိုးတွေလဲရှိသေးတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ် လူတွေ စိတ်ထားအမျိုးမျိုးရှိကြောင်း လူကောင်းယောင်ဆောင်တဲ့လူဆိုးတွေရှိကြောင်းသင်ပေးရမယ်
သမီးလေးကို စိတ်ထားကောင်းဖို့နဲ့ အနိုင်မကျင့်တတ်ဖို့ သင်ပေးရမယ် အမသားလို အရမ်းအေးသွားမှာစိုးရိမ်မိတယ် အမရယ်
ဒီမှာလဲ သိပ်အနိုင်ကျင့်တာပဲ တနှစ်ကို အနိုင်ကျင့်ခံရလို့သတ်သေတဲ့ကလေးတွေ မနဲဘူးအမရေ ဒီကြားထဲ အလုပ်တွေထဲမှာပါ အဲလိုလူတွေရှိလို့ homelessလူငယ်တွေတောင်ရှိတာ တီဗွီမှာပြဖူးတယ် အမရေ
သားလေးကို သေချာပြောပြပါ အမ အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့
အနိုင်ကျင့်သူတိုင်းဟာ စိတ်ထားမကောင်းတာတို့ သူတပါးကို မနာလိုတာတို့အပြင် မိဘတွေကြောင့်အနိုင့်ကျင့်ကြတာဖြစ်ပီး အနိုင့်ကျင့်သူတွေဟာ ငြိမ်ခံတာတို့ ကျိတ်ခံတာတို့ဆို အမြဲ အနိုင်ကျင့်လေ့ရှိကြောင်း သူတို့လုပ်တာမခံပဲပြန်လုပ်ရင်ကြောက်သွားတတ်တာကြောင့် မှတ်လောက်အောင်ပြန်လုပ်ဖို့လိုကြောင်းပြောပြ သင်ပေးပါလား အမ
ဖတ်ပြီးတော့ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ၊ ဝမ်းနည်းလိုက်တာ။
သားသားက မြတ်မောင်လေးနဲ့ တူတယ်။ မောင်လေး ငယ်ငယ်တုန်းက အေးလွန်းပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို အားနာသနားတတ်တာကြောင့် အမြဲတမ်း အနိုင်ကျင့် ခံရတာပဲ။ သူ့အကြောင်းကို သိနေလို့ အမြဲတမ်းလိုလိုပဲ သူ့မျက်နှာကို အရိပ်လို ကြည့်နေခဲ့ရတယ်။ သူ့ကို အနိုင်ကျင့်တယ်လူဆိုရင် အသားကုန် ဆော်ပလော်တီးပစ်ခဲ့ရော။ ကိုယ့်ထက် သုံးနှစ်လောက် ငယ်တဲ့ ကလေးတွေကို ကိုယ့်မောင်ကို ထိတော့လည်း မညှာနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါတောင့် ကိုယ့်အတွက်က မောင်လေးပဲ ရှိသေးတယ်။ တန်ခူးအတွက်က သားလေးဆိုတော့ တန်ခူးရင်ထဲက နာကျင်မှု၊ သားအတွက် စိုးရိမ်မှုတွေ ဘယ်လောက်တောင်များ များပြားလိုက်မလဲဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။
တန်ခူးရဲ့ ဆုတောင်းလေးလည်း အမြန်ဆုံး ပြည့်ပါစေ။ သားလေးလည်း မိတ်ကောင်းဆွေမွန်တွေ၊ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ အမြန်ဆုံး ရပါစေလို့ မြတ် ထပ်ဆင့်တောင်းဆုချွေပါတယ်။
အစ်မရေ... ဇွန်တို့မောင်နှမယောက်လုံးလည်း ငယ်ငယ်က ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံရဖူးတယ်။ ညီမက လသာ၂မှာ၊ သူက စိန်ပေါမှာ။ ကျောင်းချင်းလည်းမတူ၊ အသက်လည်း ငါးနှစ်ကျော်ကွာခဲ့ပေမယ့် ကျောင်းကားပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ခံရတာချင်းတော့ တူကြတယ်။ ကိုယ်ဦးထားတဲ့ခုံနေရာကို အတင်းဝင်လုပြီး ထိုင်တာမျိုး၊ မကြိုက်မှန်း သိရက်နဲ့ မခံချင်အောင် နာမည်ပြောင်တပ်ပြီး အော်ခေါ်တာ၊ မုန့်လုစားတာ... အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်ခေတ်မှာမဆို အဲလိုအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ ကျောင်းသားအတန်းအစားတွေ အမြဲ ရှိနေတာပါပဲလားလို့တောင် တွေးမိတယ်။ ဇွန်ငယ်ငယ်က အရမ်းအေးတော့ ကိုယ့်ကိုလာအနိုင်ကျင့်ရင် ဘာမှမပြော၊ ဘာမှမလုပ်ဘဲ အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှ အမေ့ကို ငိုပြီးတိုင်တာ။ အဲဒါနဲ့ အမေကနောက်ရက်မှာ ကျောင်းကားပေါ်မှာ ပါတဲ့ ဆရာမတွေကို အကျိုးအကြောင်း ပြောပြ၊ အနိုင်ကျင့်တဲ့ ကျောင်းသူအကြီးတွေကို သူ့မျက်နှာပြပြီး ဇွန့်ရှေ့မှာ သူရှိကြောင်း သူတို့နားလည်အောင် ပြောပြပေးခဲ့တာ အမှတ်ရမိတယ်။
ဇွန့်အနေနဲ့ကတော့ အစ်မသားလေးကို ရန်ကိုရန်ချင်း မတုံ့ပြန်စေချင်ဘူး။ သူ့စိတ်ရင်းကောင်းလေးအတိုင်းနဲ့ပဲ ရှေ့ဆက်သွားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိခိုက်နာကျင်မှုမရှိအောင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်စေချင်မိတယ် အစ်မတန်ခူး။
So sad to read that.. I havealittle boy too and also similar experience in SG.
We , mostly myanmar parents have like this mental torture case at schools and also i face at my office.
Special pray for your son not to meet again this bad kids.
Hi ma yay..
I am feeling touched after reading your post. I also have one year old baby girl and do not know what I will be facing in future.
I like sharing my idea to you. Instead of teaching how to react his problem, take his own idea how to response. If his idea is needed something, try adding on.The important thing is to build his own confidence and can stay away from bully friend. Trust him " he has parents who love him v much and teacher to protect him.dun worry to unfriend one or two bully friends and he will have so many good playmates.
it is easy talking naw...
အမေ၇ ညီမသမီးလေးလည်း အဲလိုဘဲကျောင်းမှာ အနိုင်ကျင့်ခံ၇တာ ခု P6ေ၇ာက်တဲ့ ထိဘဲ၊ သူက အ၇မ်းသည်းခံတတ်တယ်၊ သူငယ်ချင်းကို ဘယ်တော့မှ မကောင်းမမြင်ဘူး၊ အမေကတော့ စိတ်တွေတိုလိုက်၇တာ။
ဆုမြတ် ငယ်ငယ်က မောင်လေးအတွက် ဇတ်ဇတ်ကြဲပြန်သွားတိုင်းခဲ့တာကိုလည်းသတိရမိတယ်..။ သုတလေးအတွက်အကောင်းဆုံးကတော့...ဆရာမ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းအုပ်ကို အဲဒီကလေး သုတလေးကိုခဏခဏအနိုင်ကျင့်တဲ့အကြောင်း ၊ ကလေးကိုအနိုင်ကျင့်ခံရင်းနဲ့ depress ၀င်နိုင်တဲ့အကြောင်းကို အတိအလင်းသတိပေးပြီးတိုင်သင့်ပါတယ် အမ ။ နောက်ပြီးတော့ သုတလေးကို မကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းကိုမပေါင်းဖို့ ၊ သုတလေးနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မယ့်သူငယ်ချင်းမျိူးလေးတွေကို မတန်ခူးကိုယ်တိုင် ရွေးပေးပါအမ ။ ကလေးတွေ မွေးနေ့လိုမျိူး ၊ အိမ်မှာဆော့တာမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီး အပေါင်းအသင်းကောင်းလေးတွေရွေးပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ ။
အမတို့ရဲ့မေတ္တာအပြင် ညီမတို့တွေရဲ့မေတ္တာနဲ့ပေါင်းပြီး သုတလေးတစ်ယောက်သူငယ်ချင်းကောင်းတွေမြန်မြန်ရပါစေလို့..။
အဲဒီကလေးအဖေကို နင်ချဲခဲ့သင့်တာ။ နင်က ငကြောက်....
တန်ခူးရေ... ဒီပိုစ့်လေးကို တန်ခူး တင်လိုက်ထဲက ကိုယ် အခေါက်ခေါက် လာဖတ်ပါတယ်... ပြိးတော့ ကွန်မန့်တွေ တက်လာသမျှကိုလည်း ဖတ်ပါတယ်... ကော်မန့်အများစုက သူတို့ သား သူတို့ သမီးတွေလည်း အနိုင်ကျင့်ခံရသူတွေချည်း ဆိုတာ တွေ့ရတော့ ဘာပြာရမှန်းမသိအောင် အံ့အားသင့်မိပါတယ်...။
ကိုယ့်သား အသက် ၁၆ နှစ်ပါ... စကာင်္ပူမှာ K1 က စတက်ပါတယ်... အခု Secondary4ပါ...။ သားရဲ့ ကျောင်းသားဘ၀တလျောက်မှာ ကိုယ် ဒီလိုအဖြစ်မျိုး တစ်ခါမှ မကြုံဖူးခဲ့ရဘူး... ဒါကြောင့် အံ့အားသင့်စွာဖတ်ပြီး ဘာတွေများ လွဲချော်နေတာပါလိမ့်လို့ အပြန်ပြန် အထပ်ထပ် စဉ်းစားပါတယ်... အဖြေကတော့ မရေရာပါဘူး... တခုပဲ ကိုယ်ပြောလို့ရတာက ကျောင်းရွေးချယ်မှုပါ...။
လူမျိုးရေးခွဲခြားတာ မဟုတ်ပေမဲ့ မလေး များတဲ့ကျောင်းဆို လူမကြိုက်ကြပါဘူး... မလေး ကလေးလေးတွေဟာ တခြားကလေးတွေထက် နည်းနည်း ပိုပြီး ဆိုးကြလို့ပါ...
သား သုတလို ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နုနယ်တဲ့ စိတ်အတွေးထဲမှာ အခုလောက်တောင် ဒါဏ်ရာတွေရှိနေတာ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ထိခိုက်လို့ မဆုံးပါ...။ ဘာသာတရား အဆုံးအမရှိတာကို သိပ်နှစ်သက်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့လည်း ဒါဟာ သူများအနိုင်ကျင့်တိုင်း ငုံ့ခံနေရလောက်အောင်၊ အားလုံးကို မေတ္တာတရားနဲ့ တုန့်ပြန်နေရလောက်အောင်တော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး…။ ဒါကြောင့် ကျောင်းပြောင်းလို့ရရင် ပြောင်းပေးလိုက်စေချင်ပါတယ်...။
နောက်တခုကတော့ သားလေးကို ရွယ်တူကလေးတွေကြားမှာ flexible ဖြစ်တတ်အောင် နေခိုင်းဖို့ပါ… ပြီးတော့ တော်ရုံ သေးသေးမွှားမွှား ကိစ္စတွေကို ခရေစေ့တွင်းကျ သိရအောင် မိဘက အရမ်း pressure ပေးပြီး မမေးပါနဲ့... primary4ဆိုတော့ သူ ၁၀ နှစ် ကျော်ပေါ့… ကလေးဆိုပေမဲ့ သိပ်တော့ အငယ်ကြီး မဟုတ်လှတော့ဘူး… ဒီတော့ တခုခုဆို သူ့ဟာသူ ဖြေရှင်းတတ်အောင်… ပြောရရင် နည်းနည်း mature ဖြစ်အောင် မသိမသာလေး လွှတ်ထားပေးလိုက်ပါ... အခုကြည့်ရတာ သားက ဖေဖေ မေမေနဲ့ အမ ကြားမှာ သိပ်ဘေဘီဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်တယ်... မိုးခြိမ်းရင် သားက ကြောက်တတ်တယ်လို့ မကြာခဏ repeat လုပ်နေမဲ့အစား မိုးခြိမ်းနေချိန်မှာ သူ့ကို မသိချင်ယောင်လေး ဆောင်ပြီး တခြားအာရုံတစ်ခုခု ပြောင်းပေးထားတာမျိုး လုပ်ကြည့်ပါ…။
ပြီးတော့ သားနဲ့ အရွယ်တူမှာ သားထက်ပိုပြီး လည်ဝယ်ပါးနပ်တဲ့ကလေးတွေဟာ သားရဲ့ အားနည်းချက်ကိုလည်း မြင်နေကြပြီလေ… သူတို့ စ တိုင်း သူတို့ အနိုင်ယူတိုင်း ၀မ်းနည်းတတ် မျက်ရည်ကျတတ်တာကို သူတို့ သိနေမယ် ထင်တယ်… သားကို ဒီ့ထက် strong ဖြစ်အောင် ကျင့်ပေးပါ တန်ခူးရေ… တန်ခူးကိုရော သားဖေဖေကိုရော ရင်းရင်းနှီးနှီး သိကျွမ်းခင်မင်တဲ့သူတစ်ယောက်မို့ ဒီအဖေ ဒီအမေက မွေးတဲ့သားဟာ အင်မတန်စိတ်ကောင်းရှိပြီး နူးညံ့မယ်ဆိုတာလည်း တွက်ပြီးသားပါ… ဒါပေမဲ့ စိတ်ကောင်းရှိတာနဲ့ စိတ်ဓါတ် ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ဟာ နည်းနည်းတော့ ကွာတယ်မဟုတ်လား…
နောက်ပြီး ကိုယ့်ကို လက်သီးနဲ့ ဆင့်ဆင့် ထိုးနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ ငါအသက်ရှူမ၀လို့ တော်တော့လို့ တောင်းပန်နေမဲ့အစား ဆရာမသာ ပြေးတိုင်လိုက်တော့ လို့ သင်ပေးလိုက်ပါ…
လောလောဆယ် စိတ်ထဲရှိသမျှ အကုန် ချရေးခဲ့တယ် တန်ခူးရေ…း)
ဒီပို့ စ်ကို ရေးရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်က ဘ၀တူတွေချင်း အတွေ့ အကြုံဖလှယ်ပြီး တယောက်နဲ့ တယောက် အကြံပေးကြ ဝေမျှကြဖို့ မို့ကော်မန့် လေးတွေကို တိတ်တခိုးမျှော်လင့်မိပါတယ်… ကော်မန့် လေးတွေနဲ့ဝေမျှခံစား အကြံပေးတာတွေ တွေ့ ရတော့ အရမ်းဝမ်းသာပြီး သားလေးကို သံယောဇဉ်ရှိကြတာကိုလဲ အရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်… ဒီပို့ စ်ကို ဖတ်ပြီး တချို့ မိဘတွေ စိုးရိမ်သွားတာမျိုးတွေ့ ရလို့နဲနဲရှင်းပြပါရစေ… တကယ်တော့ ကလေးတိုင်း ဒီလို ကြုံတွေ့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး… အများစုက လယ်လယ်ဝယ်ဝယ်နဲ့ရှောင်တတ်တိမ်းတတ်ပါတယ်… ကျွန်မကိုယ်တိုင်တောင် ငယ်ငယ်က သားလို မကြုံတွေ့ ခဲ့ရပါဘူးလို့ ပို့ စ်ထဲမှာရေးထားပါတယ်…သားလို ကလေးမျိုးက ဒီဘက်မှာ အားနည်းလို့ ပါ… ကလေးတယောက်နဲ့ တယောက် အားနည်းချက် အားသာချက်က ကွဲပြားပါတယ်… လူကြီးတွေလိုပါပဲ… ဒီပို့ စ်ကို အရမ်းရှည်သွားမှာ စိုးလို့ကျွန်မသားကို ဘယ်လို train လဲ ဆိုတာ အသေးစိတ်မရေးထားပါဘူး… ကျွန်မနဲ့ ဘ၀တူ မိဘများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး နောက်ပို့ စ်တခုရေးပါ့မယ်…
ကော်မန့် ၁ - ကောင်းသောအကြံမို့သားနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါ ထည့်ပြောဖြစ်မှာပါ… ကျေးဇူးပါ bro… ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလိုက်အထိုက် ဆက်ဆံတတ်တဲ့ စိတ်အေးချမ်းတတ်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့မိခင်တယောက်အနေနဲ့အချိန်တိုင်းကြိုးစားနေမှာပါ
ကော်မန့် ၂ - ညီမ pifpif ရေ… ဟုတ်ပါ့ညီမရယ်… အမ အဲဒီလို ကလေးမျိုး ကစားကွင်းမှာ မြင်ဖူးတယ်… အဲဒီတုန်းက သားက အရမ်းငယ်သေးတာ… အမကတော့ သူ့ မိဘကို သွားတိုင်ပလိုက်တယ်… အဲဒီမိဘက သူ့ ကလေးထက်တောင် ပိုဆိုးနေလို့နောက်ဆို သားကို အဲဒီကစားကွင်း သွားမကစားခိုင်းတော့ဘူး… ငယ်သေးတော့ ထိမိခိုက်မိမှာ စိုးလို့ လေ… အမှန်က ကလေးအဖေက ညီမကို တောင်းပန်သင့်တယ်.. အမရဲ့ ပတမဆုံးအတွေ့ အကြုံလို မဖြစ်ရအောင် ကလေးအဲလိုမျိုးဖြစ်ပြီဆို ညီမက ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် အကြံပေးနိုင်တယ် အခက်အခဲက ထွက်ပေါက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြရမယ်ညီမရေ… နို့ မို့ သူတို့ စိတ်ထဲမှာ အားငယ်ပြီး ယုံကြည်ချက်နည်းသွားလိမ့်မယ်… သမီးက ငယ်ပါသေးတယ်… ညီမအချိန်ရပါတယ်…
ကော်မန့်၃ - ကိုယ်တွေ့ လေးကို ဝေမျှပြီး အကြံပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro… သားက သူ့ ခံစားချက်တွေ မဖွင့်ပြတတ်တော့ သူ့ ရင်ထဲ ခါးသက်တဲ့ဒဏ်ရာတွေ ဘယ်လောက်တောင်များနေမလဲ မသိပါဘူးလေ
ကော်မန့် ၎ - သားအတွက် ဝေမျှခံစားပေးလို့ကျေးဇူးပါ
ကော်မန့် ၅ - ညီမရေ( JuneOne) … သူတို့ ရဲ့ သဘောကောင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ဓါတ်ခံလေးတွေကြောင့်ပေါ့… ခက်တာက လောကကြီးမှာ သဘောကောင်းတာကို အခွင့်အရေးယူတတ်တဲ့သူတွေကလဲများတော့ ကိုယ့်rightဆိုတာကိုတော့ သိအောင် ပြောပြထားညီမရေ…
ကော်မန့် ၆ - ကျေးဇူးပါညီမ( Yuya Mon) ရေ… အဲဒီမှာ အဲဒါမျိုးတွေ နည်းသလားဟင်
ကော်မန့် ရ - ညီမရေ… ကလေးတိုင်းတော့ အဲလို မဖြစ်ကြပါဘူး… တချို့ ကလေးတွေဆို ငယ်ငယ်ကတည်းက အတော်သွက်လက်ချက်ချာ မဟုတ်မခံလေးတွေပါ
ကော်မန့် ၈ - သူငယ်ချင်း စုချစ်ရေ… ကျေးဇူးပါသူငယ်ချင်းရယ်… သူ့ အဖေကတော့ ဘုန်းကြီးအပြီးဝတ်မလား မသိဘူးလို့ သားကို ခန့် မှန်းနေတာ… ကြည့်တာပေါ့ဟာ… တခါတခါကျပြန်တော့ ကြီးရင်မိန်းမယူမယ်ပြောနေတာ…. လသာ၂က အဖြစ်အပျက်က တတန်းမှာလား ၂တန်းမှာလား မမှတ်မိတော့ဘူးဟ… ငါပြောတဲ့ ၂ယောက်နင်သိပါတယ်… ငါတို့ ပြန်ပြောဖြစ်ကြဘူးတယ်လေ… ဟီးဟီး
ကော်မန့် ၉- ညီမပန်ရေ…. သိပ်ကြီးစိတ်မပူပါနဲ့ နော်… တချို့ ကလေးတွေက ဘယ်လို manageလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မိဘတောင် သင်စရာမလိုအောင် smart ဖြစ်ကြပါတယ်… လူမိုက်ကို ရှောင်တတ်အောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်တတ်အောင်တော့ သင်ပေးရမှာပေါ့ညီမရေ… အဲဒီလိုမျိုးတွေက နေရာတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိမယ်ထင်တယ်ညီမရေ…
ကော်မန့် ၁၀ - မောင်မျိုးရေ… မောင်မျိုးကော်မန့် လေးဖတ်ပြီး အမတို့ အရင်က လမ်းထဲမှာ မိသားစု တစုသွားသတိရတယ်… အဲဒီမိသားစုထဲက တယောက်ကို ထိလို့ တော့လား တအိမ်လုံးချီတက်လာကြတာ… အမမောင်လေး ငယ်ငယ်က ရန်ဖြစ်ပြီးဆို အိမ်ကို ပြန်လာတော့တာပဲ… ဘယ်တော့မှ ရန်မဖြစ်ဘူး… အဲဒီတုန်းက အမက ငယ်သေးတော့ မောင်မျိုးအမတွေလိုပဲ သူများလုပ်တာတော့ ခံမလာနဲ့ လို့မြှောက်ပေးတာ… နဲနဲကြီးလာတော့ သွေးထွက်သံယိုတွေ ဖြစ်မှာကြောက်လို့ကိုယ့်စကားကိုယ်သိမ်းရတယ်… သားကို ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်တတ်အောင် ကိုယ့်လုံခြုံရေးအတွက် ခုခံတတ်အောင် သင်ပြပေးနေပါတယ်… သားလေးကို အမြဲအကိုအရင်းတယောက်လို သံယောဇဉ်ရှိတာ ကျေးဇူးပါမောင်မျိုးရေ…
ကော်မန့် ၁၁- ညီမ ( Ya Minn)… ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်တာမျိုးတွေကို ကြိတ်မခံတတ်အောင် သင်ပေးပါညီမရယ်… အမက ကိုယ်ချင်းစာလို့ ပြောတာပါ… ဆရာမကို တိုင်ကိုတိုင်ရမှာပါ… ရှယ်ပါညီမရေ… ရှယ်လို့ ရပါတယ်…
ကော်မန့် ၁၂ - ညီမမြတ်နိုးရေ… သမီးလေးအတွက် စိုးရိမ်စိတ်တွေ planတွေ အချစ်တွေပြည့်နေတဲ့ မိခင်တယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို ညီမကော်မန့် လေးထဲမှာ တွေ့ လိုက်ရတယ်… ညီမသမီးလေးက ထက်ထက်မြက်မြက်လေးဖြစ်မှာပါညီမရေ… ငယ်ငယ်က အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တွေကို သားလေးငြိမ်းချမ်းစေမယ့် ပုံပြင်လေးတွေ ရွေးပြောတာများတာများ ပါနေမလားတော့ မသိဘူးညီမရေ… အမကိုယ်တိုင်ကလဲ ရုပ်ရှင်ဆို ကြည်ကြည်နူးနူးကားလေးတွေ ကြည့်တာမိုလား… ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ခုခံတတ်ဖို့ နဲ့ရန်ကိုရန်ချင်းမတုန့် ပြန်ဖို့ နဲ့ ကြားထဲမှာ ဆုံးမရတာ နဲနဲတော့ ခက်တယ်ညီမရယ်
ကော်မန့် ၁၃ - မြတ်ရေ… တို့ ငယ်ငယ်ကလဲ အဲလိုပဲ… မောင်နဲ့ ညီမတွေ ရှေ့ မှာ မားမားရပ်ပြီး ခုခံတာ… ညီမလေးဆို တခုခုဖြစ်လာရင် အမကို တန်းပြောတာ ဒီနေ့ ထက်ထိပဲ… သားက သူ့ အဒေါ်နဲ့ တော်တော်တူပါတယ်… ခုချိန်ထိ ညီမလေးလဲ အဲလိုခံနေရတုန်း… သူ့ ကို အကြံပေးနေရတုန်းပါ… မြတ်ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မြတ်ရယ်…
ကော်မန့် ၁၄ - ညီမဇွန်ရေ… ညီမမေမေနဲ့ အမဘ၀တူထင်ပါရဲ့… 8-) … အမလဲ အဲလိုပဲ… ကိုယ့်သားလေးက မကာကွယ်တတ်တော့ ကျောင်းကားမောင်းတဲ့သူရော ဆရာတွေရော စုံနေအောင် ပြောပြရတာ… ခုတော့ ကျောင်းကားနဲ့ မသွားခိုင်းတော့ဘူး… အိမ်က လိုက်ပို့ ကြိုပဲလုပ်တော့တယ်လေ… အမလဲ ဇွန်ပြောသလိုပဲ သားရဲ့ နဂိုကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပွန်းပဲ့သွားမှာစိုးလို့ အတော်တော့ ဂရုစိုက်ရတယ် ညီရေ
ကော်မန့်၁၅ - ညီမ Estherရေ… တို့ လူမျိုးတွေက စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်အခံကောင်းလေးတွေရှိတာကိုး ညီမရဲ့… လုပ်ငန်းခွင်မှာလဲ အနိုင်ကျင့်မှုတွေ ရှိတာပဲနော်… စလုံးမှာနေတာကြာတော့ စိတ်ရှည်သည်းခံတဲ့စိတ်တွေတောင် အတော်ယိုင်နဲ့ ကုန်တာ
ကော်မန့် ၁၆ - ညီမ jasmine ရေ… ညီမပေးတဲ့ အကြံလေးက ကောင်းလိုက်တာ… အမလဲ တခုခုဖြစ်လာရင် သူဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ မေးကြည့်ဖူးတယ်… သူ့ အဖြေက အမြဲအားမရစရာဖြစ်တဲ့အခါ ကိုယ်က အားမလိုအားမရနဲ့ သင်မိသွားရော… ညီမပြောသလို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကျင့်ကြည့်ဦးမယ်ညီမရေ… ကျေးဇူးပါ
ကော်မန့် ၁ရ - ညီမခင်လေးရေ… p6ထိအောင် ခံရတာလား… သမီးလေးက အတော့်ကို သဘောကောင်းတယ်ထင်တယ်… တခါတလေ သူတို့ နဂိုဗီဇလေးကိုက အဲလို အေးဆေးသည်းခံတတ်တာဆိုတော့ အတော်တော့ ပြင်ရခက်တယ် ညီမရေ… စလုံးကတော့ သိတဲ့အတိုင်းညီမရေ… ခံနေလို့ ကတော့ ခံပေဦးတော့နော်… မိဘအချင်းချင်းမို့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ညီမရယ်
ကော်မန့်၁၈ - ညီမဆုမြတ်ရေ… အမလဲ ညီမလိုပဲ… မောင်တွေညီမတွေ အတွက် ဇတ်ဇတ်ကြဲခဲ့တာ… ညီမပြောသလိုပါပဲ အမလုပ်နေပါတယ် ညီမရေ… အကြံပေးတာ ကျေးဇူးပါ… အမအပေါ်မှာ ရှင်းပြခဲ့သလို အမရဲ့ အသေးစိတ် follow upကို ဒီပို့ စ်ထဲမှာ မရေးလိုက်ဘူး.. အရမ်းရှည်သွားမှာ စိုးလို့ ပါ… နောက်ပို့ စ်တပုဒ်ရေးပါ့မယ်… သားကို ကျောင်းကားနဲ့ မပို့ ဖြစ်တော့ပါဘူး… သားဆရာမတွေအားလုံးနဲ့ အမြဲ contactရှိပါတယ်… ညီမလေး ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ
ကော်မန့် ၁၉ - စင်စင်က ကြောက်တာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး ညီမရယ်… ရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့ သူလဲ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတာ နေမှာပါ
ကော်မန့် ၂၀ - သက်ဝေရေ… အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ကလေးတယောက်နဲ့ တယောက် အားနည်းချက် အားသာချက်မတူကြပါဘူး… လူကြီးတွေမှာလဲ ဒီလိုပါပဲ… သက်ဝေကံကောင်းတာက သက်ဝေမှာ အရမ်း perfectဖြစ်တဲ့ သားလေးတယောက် ရှိတာပါပဲ… သက်ဝေတို့ မောင်နှံရဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုကြောင့်လဲပါမှာပါ.. တချို့ ကလေးတွေက မွေးကတည်းက တချို့ နေရာတွေမှာ အားနည်းကြပါတယ်… သားက သူ့ အဒေါ် တန်ခူးညီမလေးနဲ့တော်တော်တူပါတယ်… သူ့ အဒေါ်က ခုဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အထိ bully လုပ်ခံနေရတုန်းပါပဲ… အဖေ အမေ အမက အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ သူ့ ကို တောက်လျှောက်သွန်သင်နေတဲ့အထဲက သူ့ မှာ အတော်အားနည်းနေတာပါ… အမှန်ပဲ သက်ဝေရေ… သားအပေါ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ထဲမှာ မလေးကလေးတွေနဲ့ များပါတယ်... သားကို အဲဒီကိစ္စတွေဖြစ်တော့ သက်ဝေပြောသလို ကျောင်းပြောင်းဖို့ စဉ်းစားပါတယ်… အကြိမ်ကြိမ်ပါ… ဒီနှစ်မှာ အခွင့်အရေးရလို့ ပြောင်းမယ်လုပ်တော့ သားက လက်မခံပါဘူး… သူက သူ့ ကျောင်းကို အရမ်းသစ္စာရှိလွန်းပါတယ်… တချို့ သားစရိုက်တွေက သာမာန်ကလေးတွေမှာ မတွေ့ ရအောင်ထူးခြားပါတယ်… နက်နက်နဲနဲ အရမ်းခံစားတတ်ပါတယ်… သားကို independent ဖြစ်အောင် အမြဲကြိုးစားနေပါတယ်… နောက်ပို့ စ်တခုမှာ သားလို အားနည်းချက်ရှိတဲ့ကလေးကို မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုနည်းတွေသုံး train လဲဆိုတာ ရေးပါ့မယ်… လိုတာရှိလဲ အားလုံး ၀ိုင်းပြင်ပေးလို့ ရအောင်ပါ… ခုချိန်မှာ ဘာအလိုချင်ဆုံးလဲမေးရင် သားလေး strongဖြစ်ဖို့ နဲ့ကာကွယ်ခုခံတတ်ဖို့ အလိုချင်ဆုံးပါ… မိခင်တယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကလေး ဒီလိုခံနေရတာ အလွန်နာကျင်လှပါတယ်… ဒီတော့ အဆုံးထိနည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားနေပါတယ်… သက်ဝေရဲ့ မေတ္တာတွေ အပြည့်နဲ့ ကော်မန့် အရှည်ကြီးအတွက် ကျေးဇူးပါ
တဦးတည်းသားတွေရဲ. အားနည်းချက်က အဖော်ခင်တတ်တယ် သူတို.ကို နိုင်နေတာကို သီးခံပြီးပေါင်းနေတာ.. မြန်မာပြည်က ကျောင်းမှာတုန်းက အဲလိုအဖော်တွေက အနိုင်ကျင်.တာ ခံရတယ် စလုံးမှာတော. ကံကောင်းစွာ ရတဲ.ကျောင်းက တရုတ်များတယ်.. မလေးမရှိသလောက်ပဲ. ဒါတောင်ရောက်စနှစ်က ဆိုးတဲ.ကလေးတွေရှိတဲ.အတန်းထဲဆိုတော. သားကို အတန်းထဲကကောင်လေးတွေနဲ. သူ.အကိုတွေပေါင်းပြီး ကျောင်းပြန်ရန်စတာတို.ဘာတို. လုပ်လာလို. နောက်နေ.ကျောင်းလိုက်သွားပြီး decipline teacher ကိုတိုင်လိုက်တာ ပြသနာအေးသွားလို.တော်သေးတယ် တခုခုဆို အဲလိုတိုင်လိုက်ပါ
I like ama thet wai's comment that how to treat. and also like ama takhu comment that thuta lay will become strong!!!!
post နဲ့ ကွန်မန့်တွေဖတ်ပြီး စိတ်မောသွားတယ် အမရဲ့ လေးကိုလည်းမျှော်နေပါတယ်နော်